musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Kufamba Nhau » Seychelles inopenya paModetour Travel Mart 2019
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • North Korea Kuputsa Nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
The Seychelles Tourism Board (STB) vakatora chikamu kekutanga kuratidzwa kwechitanhatu kweMode Tour Travel Mart kubva munaGunyana 5 kusvika Gunyana 8, 2019, kuCOX exhibition centre, muSeoul South Korea.
Chiratidziro chemazuva mana chekutengeserana nevatengi chakawana kutora nzvimbo kwenzvimbo makumi mashanu neshanu, nematumba mazana mashanu nemakumi mashanu kubva kumasangano mazana mana nemakumi maviri nemakambani, kusanganisira mabhodhi ezvekushanya, ndege uye mahotera.
Mai Amia Jovanovic Desir, STB Director weIndia, South Korea, Australia neSouth East Asia naMai Judy Yun, maneja weAccount weStB Office muSouth Korea vakamiririra Seychelles pakuratidzira.
Mutungamiriri we STB akataura kuti kuvapo kwe STB pachiitiko chekutengeserana cheSouth Korea kunotevera kutambirwa kwakanaka kwakagamuchirwa munyika apo timu ye STB yakaita kushanya kwekutengesa muna Chikumi gore rino.
Chikwata cheSeychelles chaive nemukana wekushambadzira wekushambadzira kwaienda kune vekuSouth Korea vekutengesa navo pazuva rekutanga yechiitiko, yaive chiitiko cheBusiness-to-Bhizinesi.
Sechikamu cheyake yakasimba nzira yekutenderera kukurudzira kukurudzira kwainoenda pachiitiko, timu ye STB yakatanga mutambo wekutengesa; chirongwa chekupa mubairo vatatu vepamusoro avo vakatengesa mapakeji mazhinji pakati paGumiguru 1, 2019 naJanuary 31, 2020 nemukana wekuitisa rwendo rwekudzidzisa kuSeychelles.
Pfungwa iyi yakagamuchirwa zvinobudirira sezvo vakawanda vavakidzani uye vezvekufambisa vakashanyira STB stand vakaratidza kufarira kwakasimba kuti vapinde mumakwikwi.
Vamiriri veSouth Korea vaivapo pachiratidziro vakagamuchirawo kopi yechinyorwa cheiyo Destination Management Makambani, (DMCs) muSychelles.
Mazuva matatu ekupedzisira erunyararo akatsaurirwa kune vamwe vatengi. Kudzokorora kubudirira kwakasangana pazuva rekutanga nevekutengeserana navo, timu ye STB yakapupura nemufaro mhinduro yakanaka kune mutengi Spinning Roulette Chiitiko chirongwa chakarongedzwa panhandare ye STB kubata meso evashanyi.
Iko kunakidzwa kwakavakirwa pachirongwa kunoda kuti mumwe nemumwe anenge atora chikamu ataure izwi rekuti "Seychelles" zvinonzwika uye achitenderera roulette kuti agamuchire chinhu chakamisikidzwa kubva kuSTB kusanganisira bhodhoro remvura kana matauro emitambo.
Sezvo nhengo dzeveruzhinji dzakamirira kutenderera roulette, vaive nemukana wekuona Seychelles mavhidhiyo ekuenda pamwe nezvinhu zvakasiyana zvekushambadzira, zvakapihwa timu navo.
Vachitaura nezvekubudirira kwemazuva matatu evatengi, Mai Jovanovic Desir vakataura kuti sitendi ye STB yakagamuchira vanopfuura 1500 vashanyi vanosanganisira mhuri, vakaroora uye vana, vaifarira roulette uye panguva imwechete vakawana mukana wekudzidza nezve Seychelles.
"Takave nemukana wekuita vashanyi vari kuronga kushanyira nekuongorora zviwi zvedu pazororo ravo rinotevera, vakave nemukana wekutsvaga rumwe ruzivo uye vakabvunza kuti vanganyatsogadzirira sei kushanya kwavo. Izvo zvakakosha kuti uwedzere kuti kune huwandu hwakawanda uye chiyero chechidimbu chakakamurwa, kunze kwekufunga kwakajairika kuti Seychelles inongova nzvimbo yekuchamhembe kwevekuSouth Korea, "akadaro STB Director pachiitiko ichi.
Mamiriro ekunze uye Zvehupfumi Zvemari Ikozvino kweGreen Tourism ...
Norton mushumo: Tech rutsigiro chitsotsi ndiyo Nha. 1 ...